Waa maxay inta badan in Horukon qaabeynta group qowladda pachinko ah
トップページ ＞ 言語 ＞ ソマリ語 ＞ Waa maxay inta badan in Horukon qaabeynta group qowladda pachinko ah
qaabeynta kooxda The, ay jawaab u signal Ghanna ka qaabeynta Hall ee koox kasta uu noqon doono mid ka mid ah in saaray Ghanna ah. Strategy ee qabashada hoolka conserver ah, waa waxa uu ahaa Dasa u maleeyay. Halkan, conserver hall ka qabashada fiiriyey, waxaan rabnaa in aan soo bandhigo waxa loo yaqaan qaab caadi ah in qaabeynta kooxda.
qaabeynta kooxda The in qabashada conserver hoolka, tirada dhamaadka qaabeynta, dhinac-ilaa-dhinac u qaabeynta, waxa la sheegay in ay jiraan saddex nooc oo qaabeynta aan joogto ahayn. iyaga ka mid ah, qaabeynta la sheegay in ay qaran ahaan ugu waaweyn, qaabeynta dhinac-ilaa-dhinac ayaa kala gudbiyo sida qaabeynta dhamaadka, laakiin ma garanayo in ay tahay mid ka mid ah si rasmi ah in kiisas badan oo.
waa in qaabeynta this badan yahay, qaabeynta dhinac-ilaa-dhinac ayaa sidoo kale qaabeynta dhamaadka sidoo kale, u muuqataa in ay wax ka in ay fududahay in la xaqiijiyo, maxaa yeelay, sabab ah in ay tahay fudud la garan karo. Sababta oo ah waxa ma aha in xaqiiqda in xaqiijinta in qowladda pachinko waa laga qaadi karaa, waxa ay noqotay xaqiiqo ah in uu noqon doono sidaas wararka la isla dhexmarayo.
in ay dhacdo qaabeynta dhamaadka, dhamaadka miiska on taas oo ku xiran yihiin tirada transformer waa madal la mid noqon doono mid kooxda. 1 group waa u muuqataa ku saabsan qallafsan shan. Tusaale ahaan, in 20 cutub oo gasiiraddii joogtay, waxa ay noqon doontaa xaqiiqda ah in shan kooxood oo waxaa jira qabtay oo gasiiraddii joogtay.
isutagga this, sababtoo ah ayaa lagu fuliyay qowladda pachinko oo dhan u noqon doonaa cabashada in qabashada conserver hoolka. Ma in ay sidoo kale noqon lahayd inta badan, qaabeynta dhinac-ilaa-dhinac, dhinac-ilaa-dhinac, waxa uu noqday a afar ilaa shan kooxood, markii ku guuleystay lottery Ghanna ah, xaqiiqada ah in Ghanna dhexdeeda waxaa loo qeybiyaa aad doonaa.
Si kastaba ha ahaatee, sannadihii la soo dhaafay, waxa la sheegay in ay jiraan sidoo kale waa martida pachinko ee isku dhafka ah ee qaabeynta dhamaadka iyo qaabeynta dhinac-ilaa-dhinac ah. Haddii qaabeynta dhinac-ilaa-dhinac ah iyo qaabeynta dhamaadka lagu qaso, si aad u leeyihiin kala duwan by jasiiradda, aan go'aan ka ayaa la sheegay in wax yar ka badan ay adag tahay noqdaan. Waxaa ka mid ah tii
pachinko, iyo jasiiradda of qaabeynta dhinac-ilaa-dhinac, tan iyo jasiiradda of gaadmada ah dhamaadka lagu qaso, waxa la sheegay in ay qaataan waqti si ay baaritaan marka Ghanna ayaa dhacay. kooxdan qeybinta -Loop waa wax loo eegin daydo sida, ka dibna in ay ku lifaaqan ee kaliya taagan tiro, aan wax Ghanna in inta badan waxay dhacdaa koox la mid ah gudahood.
Laakiin dhawaan, waxaa jira tii pachinko badan oo ku adkeeyey mid ka mid ah transformer in ay mid ka mid ah si looga hortago dhibaato. Oo waxakanna, waxaa sharxay jiritaanka isutagga leeyihiin mar dambe u hoggaansamaan. fikrad
of qaabeynta kooxda, waxaa la qiyaasayo in tirada salka of Ghanna ah ma jiro wax sal kaliya dhacaya si wadajir ah u noqon. In dukaanka pachinko kuu raaco, in ama aan qaabeynta kooxda ku xusan in qabashada conserver hall la dhiso, waxa laga yaabaa xiiso leh in aad eegtid mar.